पशुपतिनाथको २३१ रोपनी जग्गा कसले खायो ? - Sindhuli Saugat
पशुपतिनाथको २३१ रोपनी जग्गा कसले खायो ?
पत्रपत्रिकाबाट २०७६ वैशाख ३१ गते मंगलवार काठमाडौं
यो समितिले १८६७ सालको लालमोहरलाई आधार बनाएर पशुपतिको जग्गाको छानबिन गरेको हो । पशुपति जयवागेश्वरी भण्डार तहबिलको साबिकको सबैभन्दा माथिल्लो सिरानीको व्यहोरामा ‘आगे दाखित बाँकी साल तमाम आमदानी श्री जयवागेश्वरी देवीमा नित्य पर्व पूजा मामुलियत गुठीमा दरियाको १८६७ साल मार्ग १ बदी ९ रोज ३ का लालमोहरबमोजिम दुक्का बिर्ताको दर्साविक बमोजिमको समेत पैदावार (मोही) आमदानी, कमदार, कारिन्दाको महसुलसमेत असुल हुने’ उल्लेख छ ।
पशुपतिनाथको जग्गा १९ हजार रोपनी
समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको देशभर १८ हजार ८ हजार ८२ रोपनी १४ आना रहेको तथ्य फेला पारेको छ । कोषको तीनवटै कार्यालयको लगतभित्र दर्ता प्रमाणित भएको जग्गा ४ हजार १८१ रोपनी १३ आना ३.५ पैसा जग्गा छ । पशुपतिको कोर क्षेत्रमा १ सय रोपनी ३ पैसा ३ दाम जग्गा छ ।
२०६४ जेठ ३२ मा २९ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा र २०६२ कात्तिक २२ गते १९ रोपनी १५ आना १ दाम जग्गा अधिग्रहण गरेर पशुपतिको नाम दाखिला गरिएको थियो । गोठाटार क्षेत्रमा ५३४ रोपनी र तारागाउँ रिजेन्सी होटलले चर्चेको १७ रोपनी जग्गा पनि पशुपतिनाथकै हो । पशुपतिको ११२६ रोपनी त्रिभुवन विमानस्थलले प्रयोग गरिरहेको छ । कोषले त्यो जग्गा ९९ वर्षका लागि विमानस्थललाई भोगचलन गर्न दिएको छ ।
२०७० जेठ ३० गते पशुपतिको अतिक्रमित धेरै जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । बी १३ क्षेत्रको ४४ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । भण्डारखाल रहेको जंगलको १४६ रोपनी ५ आना ३ पैसा, सिफल चउरको १६ रोपनी ९ आना २ पैसा, कैलाश चउरको ४९ रोपनी १ आना २ पैसा, पशुपतिनाथ मन्दिरको ८ रोपनी ८ आना २ पैसा, बागमती नदी १५ रोपनी ५ आना ३ पैसा, गोरखनाथ मन्दिर सत्तलको ५ रोपनी, ७ आना २ पैसा, १५ शिवालयको ३ रोपनी १ आना, गुह्येश्वरी मन्दिर सत्तलको १६ रोपनी ५ आना जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
विश्वरूप मन्दिर परिसरको ५ रोपनी ४ आना, कोष परिसरको ६८ रोपनी ७ आना २ दाम जग्गा रहेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पशुपतिको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा ९४६ रोपनी १ आना २ पैसा छ । नेपाल आँखा अस्पतालले ३२ रोपनी जग्गा चर्चेको छ । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाले २० रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । महास्नान पोताका नाममा १२४१ रोपनी १ आना २ पैसा जग्गा छ । गुठी संस्थानको नाम १०१५ रोपनी १५ आना १ पैसा छ ।अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।
पछिल्लाे - २०७६ साल वैशाख ३१ गते मंगलबारको राशिफल ( ज्योतिषी दुर्गा भण्डारी)
अघिल्लाे - ओलीलाई अल्पमतमा पर्ने